Caanaha Caruurta Ee U Fiican Oohinta, Laab Jeexa, & Calool Istaaga - Arimaha Bulshada
Caruurta marka ay yar yihiin waxay u baahan yihiin in si aad ah loo koontaroolo nafaqadooda, mar walba kala tasho dhaqtarka caruurta, cuntada iyo caanaha ay siineyso canugaaga.
Halkaan waxaan idiin kugu soo koobeynaa qaar ka mid ah caanahu u fiican caruurta siiba kuwa ka joojiha oohinta, diliqa, dhuusada iyo calool istaaga.
Caanada u fiican oohinta badan
Oohinta badan (Colic) waxaa loola jeedaa caruurta aan oohinta joojineynin ilaa muddo seddex saacadood ah.
Haddii ay kula tahay in oohinta canugaaga iyo caanaha uu cabayo inuu xiriir ka dhaxeeyo, waa inaad doorato caano ku haboon oo canugaaga dejin kara.
Laakiin xaqiiqda waxa ay tahay inaysan jirin cadeymo muujinaya inay jiraan caano gaar ah oo canugaaga oohinta ka yareynaya. Laakiin waxaa jira caano loogu talogalay inay dejiyaan caruurta taasoo yareyn karta oohintooda.
Maxay ku fiican yihiin: Gerber waxay sheegtay in caanahooda ay u dhow yihiin kuwa naaska oo kale, islamarkaana ay caawiso caruurta oohinta badan. Caanahaan waxaa boqolkiiba 30 ku jira laaktoos, taasoo ay shirkada sheegtay inay dejiso calaasho ilmaha yar (baaris lagu cadeeyay arintaan ma jirto). Waxaa sidoo kale caanahaan ku jira prebiotics iyo probiotics.
Ogow: Walidiinta ka warbixiyay caanahaan waa ay jeclaadeen laakiin waxa ay dareemayaan inay yihiin kuwa adag oo aan dhaqso ku milmeynin dhalada. Qaar ayaa sheegay in urta caanaha ay xun tahay islamarkaana dhadhanka aysan caruurta jecleyn oo mararka qaar ay diidaan inay cabaan.
Caanada u fiican diliqa (reflux)
Caruurta caanaha la siiyo ayaa inta badan ka diliq badan kuwa la naas-nuujiyo. Diliqa caruurta waxa uu meel sarre gaaraa marka ay ilmaha afar bilood gaaraan.
Waxaa jira caano lagu adkeeyay bariis oo u fiican caruurta diliqa badan. Caanahaan waxay ka caawin karaan caruurta inay ka yareyso diliqa badan, wax dhibaato caafimaad ahna uma lahan caruurta.
Maxay ku fiican yihiin: Sida caanaha kale ee la adkeeyo, Enfamil waxa ay sheegtay in caanaheeda A.R. ay ku dhaqmaan sharuucda ay dejiyeen machadka dhakhaatiirta caruurta ee Mareykanka. Caanahaan waxaa ku jira maado laga soo saaray bariiska oo ka caawineysa inay adkaadaan islamarkaana ay ku xasilaan caloosha ilmaha. Shirkada caanaha soo saartay waxaa taageeraya daraasad la sameeyay 2003dii oo soo bandhigtay in isticmaalka caanaha ay yareeyeen boqolkiiba 50 diliqa caruurta.
Ogow: Waa inaad kala hadasho dhakhtarka ilmahaaga ka hor inta aadan siinin caanahaan. Inkastoo waalidiinta qaar ay ku dhaartaan in caanahaan ay yihiin kuwii ugu fiicnaa ee ay tijaabiyeen, kuwa kale ayaa iyagana jawaab celin taas ka duwan ka bixiyay.
Caanaha u fiican dhuusada badan ee caruurta
Inkastoo aan waxba loo arkin dhuusada badan ee caruurta hadana mararka qaar waxa ay xanuun ku keeni kartaa ilmaha. Maanka ku haay haddii dhuusada ay aad u badato inay calaamad u tahay xasaasiyad ama arin kale oo caafimaad. Haddii caano bedelka aysan caawinin, ugee dhakhtarkiisa.
Maxay ku fiican yihiin: Enfamil waxay sheegtay caanaheeda la tijaabiyay oo ay yareeyaan aariyada iyo oohinta caruurta hal maalin gudaheed. Caanahaan waxaa ku jira maadada DHA oo kobcisa maskaxda caruurta.
Ogow: Waalidiin badan ayaa ku qancay caanahaan, waxaana ay dareensan yihiin inay caawiso caruurtooda. Waxa kaliya ee ay ka sheegeen ayaa ah in quudinta ka dib ay dhalada noqoto mid saliid leh.
Caanaha u fiican caruurta ay caloosha joogsato
Ma jiraan caano badan oo loo suuqgeeyo caruurta ay caloosha istaagto. Waa wax caadi ah in caruurta caanaha caba inay maalintii saxaroodaan labo ama seddex jeer ka hor inta aysan raashiin caadi ah bilaabin markaasoo ay saxaroodaan labo jeer.
Haddii canugaaga ay saxaro adag ka soo baxeyso ama waqtiga uu u kala dheer yahay, waxaad isku dayi kartaa caano ka duwan kan aad haatan siineyso ama la hadal dhakhtarkiisa si uu arintaan kaaga caawiyo.
Maxay ku fiican yihiin: Enfamil waxay sheegeen in caanahooda ay ka caawinayaan in ilmahaaga uu si raaxo leh u saxaroodo isbuuca koowaad ee uu isticmaalo. Waxaa caanaha ku jirta maadada birta iyo probiotics oo ay Enfamil sheegtay inay ka caawineyso dheefshiidka. Caanahaan waa kuwa maalin walba la isticmaali karo.
Ogow: Dadka caanahaan isticmaalay waxay ka bixiyeen jawaabo kala gedisan, qaar waxay sheegeen in caruurtooda ay ku faa;ideen halka qaar ay sheegeen inaysan ku faa’idin.